आखिर यी किशोरीले किन बिक्री गरिन् आफ्नो कु मा रि त्व ? यस्तो छ कारण – - Kohalpur Trends
आखिर यी किशोरीले किन बिक्री गरिन् आफ्नो कु मा रि त्व ? यस्तो छ कारण –
एजेन्सी । जब एक किशोरीले आफ्नो कु मारि त्व लिलामीमा उद्घोष गरिन्, सर्बत्र हं ग मा म च्चि यो । तर, आफु किन कु मा रि त्व गु माउन वाध्य हुनुपर्‍यो भन्ने सन्र्दभमा तिनले गरेको तर्क निकै मार्मिक र दुख लाग्दो थियो । ‘परिवारको घर बिक्री हुनबाट जोगाउनका लागि’ आफुले कु मारित्व लिलामीमा राख्नु परेको उनको भनाई थियो ।
रोमानियोमा बस्ने किशोरी अलेक्जेन्ड्र कैकरिनले जसै कु मा रि त्व लिलामीमा राखिन्, हङकङका व्यापारी अघि सरे । त्यसका निम्ति उनले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य चुकाए । किशोरी १८ बर्षकी थिइन् । र, उनले जर्मनीमा आधारित सिन्ड्रेला एस्कार्ट एजेन्सीमार्फत आफ्नो कु मा रित्व लि ला मीमा राखेकी थिइन् । उनले त्यसको मूल्य, ८ लाख पाउन्ड राखेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘म कु मा रित्व गु मा एर आफ्नो परिवारको लागि घर खरिद गर्न चाहन्छु ।’
तर, जब छोरीको यस्तो उद्घोष बुवाआमाले सुने, उनीहरु निकै खिन्न भए । उनीहरुले एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा भने, ‘हाम्रो छोरीले आखिर किन यसो भनिरहेकी छिन्, हामी दुखी छौं । उनले घर जोगाउनका लागि कु मा रित्व बे च्ने कुरा गरेकी छिन् तर हाम्रो घरको कुनै फाइनान्सियल लोन छैन ।’
किशोरीको पिता प्रहरी र आमा फर्मासिस्ट हुन् । उनीहरु कुनै हिसावले ऋणमा डुबेका छैनन् । सबैकुरा थाहा पाएपछि अभिभावकले किशोरीलाई त्यस्तो हर्कत गर्नबाट रोक्न खोजेका थिए । तर, उनी रोकिएनन् । एक कदम अघि बढेर भनिदिए, ‘म १८ बर्षकी हुँ । र, म आफ्नो शरीरको लागि जे गर्न पनि राजी छु ।’
कसरी आयो कु मा रित्व बिक्री गर्ने आइडिया
कैफरिनको अनुसार उनले १५ बर्षमा एक फिल्म हेरेकी थिइन्, टिभीमा । त्यसमा एक किशोरी आफ्नो आवश्यक्ता पुरा गर्न एक रातको लागि आफु स्वंमलाई बिक्री गर्छिन् । यहि फिल्म हेरेपछि उनलाई भ र्जि नि टी बिक्री गर्ने आइडिया आएको थियो ।
Previous Previous post: सहमति नगरी न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको भन्दै निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
Next Next post: वाग्मती किनारमै जलाउन थालियो कोरोना संक्रमितको शव